आइपीएल मिनी अक्सन : कुन टिमलाई कति फाइदा, सन्दीप कता?
9th January 2021, 07:44 am | २५ पुष २०७७
इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १४ औं संस्करणका लागि तयारी सुरु भइसकेको छ। आईपीएलको गभर्निङ काउन्सिलले सबै टिमलाई २१ जनवरीसम्म रिटेन र रिलिजका लागि खेलाडीको लिस्ट जारी गर्न भनिसकेको छ। मिनी अक्सनमा सबैभन्दा धेरै नोक्सान चेइन्न सुपर किंग्स र फाइदा मुम्बइ-दिल्लीलाई हुने देखिएको छ।
चेन्नइले यो अक्सनमा २४ मध्ये १२ खेलाडीमात्रै रिलिज गर्न सक्नेछ। त्यस्तै किंग्स ११ पञ्जाब र राजस्थान रोयल्सले ११ खेलाडी रिलिज गर्ने देखिन्छ। टिमको बजेटमा यसपाला कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। अघिल्लो पटक झै टिमको 'पर्स'मा ८५ करोड भारतीय रुपैयाँ हुनेछ। जसमा रिटेन गरिएका खेलाडीको मुल्य पनि रहने छ।
चेन्नइको पर्समा सबैभन्दा कम १५ लाख रुपैयाँ बाँकी छ। त्यहीँ किग्स ११ पञ्जावको पर्समा सर्वाधिक १६.५ करोड भारतीय रुपैयाँ बाँकी छ।
एक टिममा कति खेलाडी?
सबै फ्रेन्चाइजीले आफ्नो टिममा बढीमा २५ र कम्तीमा १८ खेलाडी राख्न पर्नेछ। त्यसमा पनि एउटा टिममा बढीमा ८ जना विदेशी खेलाडीमात्रै राख्न पाउनेछन्।
मिनी अक्सन के हो?
अघिल्लो वर्ष अर्थात २०२० मा पनि मिनी अक्सन भएको थियो। जसमा ७३ स्लटमा ३३२ खेलाडी छनोटका लागि ८ टिमले बोली लगाएका थिए। यसमा मात्र २९ विदेशी खेलाडी र ३३ भारतीय खेलाडी गरी ६२ खेलाडी खरिद गरिएको थियो।
* मिनी अक्सनमा फ्रेन्चाइजी टिममा भएको ग्याप पुरा गर्न बोली लगाउने गर्छन्। रिटेन गरिएका खेलाडीबाहेक बाँकी सबै खेलाडी ट्रेड विन्डोमा जान्छन्।
* फ्रेन्चाइजीले एउटा तोकिएको समयसीमाभित्र आआफ्नो टिमबाट रिटेन गरिएका खेलाडी र निकालिएका खेलाडीहरुको सूचि दिनुपर्ने हुन्छ।
* टिमबाट बाहिरिएका खेलाडीहरुको सेलरी केपबाट आएको पैसा र आईपीएलको तर्फबाट पैसा मिलाएर फ्रेन्चाइजीले नयाँ खेलाडी किन्छ।
*फ्रेन्चाइजीले टिममा देशी र विदेशी खेलाडीको संख्यालाई तालमेल गराउँदै खेलाडी किन्छन्।
'मिनी अक्सन' बाहेक 'ट्रेड विन्डो' को पनि अप्सन
अक्सनबाहेकको अर्को अप्सन हो ट्रेड विन्डो। सोमबारबाट ट्रेड विन्डो पनि खुला गरिएको छ। यसमा दुई टिमले खेलाडी फेर्न सक्छन्। यसबाट अनक्याप्ट खेलाडी सँगसँगै क्याप्ट खेलाडी पनि ट्रेड हुन सक्छन्। आईपीएल गभर्निङ काउन्सिलको अध्यक्ष बृजेस पटेलका अनुसार फेब्रुअरी ४ मा विन्डो बन्द हुनेछ।
आईपीएलका टीमहरु कुनकुन खेलाडी रिलिज गर्न सक्नेछन्?
हालको खेलाडी संख्या : २४
भारतीय खेलाडी: १६
विदेशी खेलाडी: ८
पर्समा रहेको रकम: १५ लाख भारतीय रुपैयाँ
मिनी अक्सनको सबैभन्दा ठूलो नोक्सान चेन्नइलाई पर्नेछ। अघिल्लो सिजनमा चेन्नइ सातौं स्थानमा रहेको थियो। जसमा कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी सहित धेरैजसो ब्याट्समेन फ्लप भएका थिए।
सुरेश रैनाको अनुपस्थितिमा शेन वाट्सन र अम्बाती रायडू पनि जम्न सकेका थिएनन्। त्यस्तै सुरेश रैनाले खेल्ने या नखेल्ने भन्ने पनि अनिश्चित छ। उनको करार १३ औं सिजनबाट सकिएको छ।
रिलिज हुन सक्ने खेलाडी:
केएस आशिफ, इमरान ताहिर, केदार जादब, कर्ण शर्मा, मिचेन सेन्टनर, मोनु कुमार, आरसाई किसोर, मुरली विजय, पियुस चावला, लुंगी एनगिडी र सुरेश रैना
रिटेन हुनसक्ने खेलाडी:
रविन्द्र जडेजा, महेन्द्रसिंह धोनी, नारायण जगदीशन, जोश हेजलवुड, दीपक चहर, फाफ डुप्लिसिस, सार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्राभो, हरभजन सिंह, सेम करन
टिममा रहेको खेलाडी संख्या: २२
भारतीय खेलाडी: १४
पर्समा रहेको रकम: ९ करोड
दिल्ली क्यापिटल्सलाई मिनी अक्सनको फाइदा मिल्नेछ। १३ औं सिजनमा दिल्लीले फाइनल पुग्दै इतिहास रचेको थियो। पछिल्लो सिजन दिल्लीको टिम सन्तुलित पनि देखिएको थियो। यस्तोमा दिल्लीले केही नयाँ खेलाडीहरु ल्याएर एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नेछ। दिल्लीमा नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछाने पनि आबद्ध छन्। यद्यपि अघिल्लो सिजनमा दिल्ली फाइनलसम्म पुग्दा पनि उनले कुनै पनि खेल खेल्ने अवसर पाएका थिएनन्।
यी खेलाडी रिलिज हुन सक्नेछन्:
अजिंक्य रहाणे, आवेश खान, हर्षल पटेल, इशान्त शर्मा, किमो पउल, सन्दीप लामिछाने, एलेक्स केरी, ललित यादव, मोहित शर्मा
यी खेलाडी रिटेन हुन सक्नेछन्:
श्रेयस ऐय्यर, पृथ्बी श, शिखर धवन, जेसन रोय, अमित मिश्रा, कागिसो रवाडा, अक्षर पटेल, आर अश्विन, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस वोक्स, ऋषभ पन्त, शिमरोन हेटमायर, तुषारदेश पाण्डे
किंग्स ११ पञ्जाब
खेलाडी संख्या : २५
भारतीय खेलाडी: १७
विदेशी खेलाडी : ८
टिम पर्समा बाँकी रकम : १६.५ करोड भारतीय रुपैयाँ
अघिल्लो सिजन छैटौं स्थानमा रहेको पञ्जाबले टिममा केही परिवर्तन चाहनेछ। टिम ब्यवस्थापनले पछिल्लो सिजनमा नखेलेखा केही खेलाडीहरुलाई निकालेर नयाँ खेलाडी राख्न चाहने छ।
यी खेलाडी हुन सक्छन् रिलिज:
दर्शन नलखंडे, हार्डस विलोजेन, हरप्रीत बराढ, जगदीश सुचिथ, मुजीव उल रहमान, दीपक हुड्डा, इशान पोरेल, क्रिस जोर्डन, सिमरन सिंह, तजिन्दर सिंह, सर्फराज खान
यी खेलाडी रिटेन हुन सक्छन्
लोकेस राहुल, करुण नायर, मोहम्मद शमी, निकोलस पुरन, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, मुरुगन अश्विन, कृष्णप्पा गौतम, शेल्डन कोट्रेल, रबि बिश्नोइ, जिमी निसम, ग्लेन म्याक्सवेल र अर्शदीप सिंह
टिममा रहेका खेलाडी: २३
भारतीय खेलाडी: १५
टिम पर्समा बाँकी रकम: ८.५ करोड भारतीय रुपैयाँ
१३ औं सिजनमा कोलकताको टिम सन्तुलित देखिएको थियो। टिममा ब्याट्समेन, बलर र अलराउन्डरको राम्रो मिश्रण छ। यो अक्सनबाट टीमले राम्रो ओपनर भित्र्याउन सक्छ।
यी खेलाडी रिलिज हुन सक्छन्
प्रसिद्ध सिंह, रिंकु सिंह, सन्दीप वारियर, सिद्धेस लाड, क्रिस ग्रीन, एस सिद्धार्थ, निखिल नायक र प्रविण ताम्बे
शुभमन गिल, आन्द्रे रसेल, दिनेश कार्तिक, नितिश राणा, सुनिल नारेन, कुलदीप यादव, हेरी गर्नी, लोकी फर्ग्युसन्, कमलेस नगरकोटी, शिवम माभी, प्याट कमिङ्स, इयोन मोर्गन, वरुण चक्रवर्ती, टम बेन्टन र राहुल त्रिपाठी
हाल रहेका खेलाडी: २४
पर्समा रहेको रकम: १.९५ भारतीय रुपैयाँ
१३औं सिजनको च्याम्पियन मुम्बई इण्डियन्सलाई आईपीएलमा सर्वाधिक सफल टिमको रुपमा लिइन्छ। मिनी अक्सनको सबैभन्दा धेरै फाइदा मुम्बइलाई हुनेछ। मुम्बईको सफल कोर ११ मा सन्तुलित टिम त छँदैछ अझ एक्सपेरिमेन्टको पनि अवसर मिल्नेछ।
रिलिज हुन सक्छन् यी खेलाडी
आदित्य तारे, धवल कुलकर्णी, जयन्त यादव, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल मेक्लेनघन, क्रिस लिन, मोहसिन खान, दिग्विजय देशमुख, प्रिन्स बलवन्त सिंह
रिटेन हुन सक्छन् यी खेलाडी
रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, सौरभ तिवारी, जसप्रित बुमराह, राहुल चाहर, ट्रेन्ट बोल्ट, जयन्त यादव, किरोन पोलार्ड, क्रुणाल पाण्ड्या, अनुकुल राय, नाथन कुल्टर नाइल, हार्दिक पाण्ड्या, इशान किसन, क्विन्टन डी कक, अनमोल प्रितसिंह
टिममा हाल रहेका खेलाडी: २५
टिम पर्समा बाकीँ रहेको रकम: १४.७५ करोड भारतीय रुपैयाँ
१३ औं सिजनमा तालिकाको पुछारमा रहेको राजस्थान राम्रा बलर र ओपनरको खोजीमा हुनेछन्। स्टीभ स्मिथ, बेन स्टोक, सञ्जु सेमसन, राहुल तेवतिया जस्ता खेलाडी रहेकाले टिम ब्याटिङमा राम्रो देखिन्छ।
यी खेलाडी रिलिज हुन सक्छन्:
मयंक मारकण्डे, अंकित राजपुत, मनन बोहरा, शशांक सिंह, वरुण एरोन, ओशन थोमस, अनिरुद्र जोशी, एन्ड्र्यु टाई, आकाश सिंह, अनुज रावत र महिपाल रोमरोल
जो रिटेन हुन सक्छन्:
रियान पराग, स्टिभ स्मिथ, रोबिन उथप्पा, डेभिड मिलर, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेश उनादकट, कार्तिक त्यागी, बेन स्टोक, राहुल तेवतिया, यशस्वी जसवाल, टम करन, जोस बटलर र सञ्जु सामसन
रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्ग्लोर:
टिममा रहेका खेलाडी: २१ जना
भारतीय खेलाडी: १३
टिम पर्समा बाँकी रकम: ६.४ करोड भारतीय रुपैयाँ
आईपीएलको १३ औं सिजनको सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको बेङ्ग्लोरको टिम सन्तुलित देखिन्छ। बिराट कोहली, एबि डिभिलियर्सको उपस्थितिमा ब्याटिङलाई बलियो देखिन्छ भने बलिङमा अनुभवको कमी देखिन्छ। बेङ्ग्लोरले अनुभवी विदेशी बलरलाई टिममा जोड्न सक्ने देखिन्छ।
पवन नेगी, उमेश यादव, जोश फिलिप, डेल स्टेन, शाहबाज अहमद, पवनदेश पाण्डे, पार्थिव पटेल
जो रिटेन हुन सक्छन्
बिराट कोहली, एबी डिभिलियर्स, गुरकिरत सिंह, देवदत्त पार्डिकल, एरोन फिन्स, युजवेन्द्र चहल, मोहम्मद सिराज, नवदीप शैनी, केन रिचर्डसन, इसरु उदाना, मोइन अली, शिवम दुबे, वासिङ्टन सुन्दर, क्रिस मोरिस
टिममा रहेको खेलाडी संख्या: २५
भारतीय सदस्य: १७
विदेश खेलाडी: ८
टिम पर्समा बाँकी रकम: १०.१ करोड भारतीय रुपैयाँ
बलरहरुको टिमका रुपमा चिनिने सनराइजर्स हैदराबादमा पछिल्लो सिजनमा फास्ट बलरको कमी खड्कियो। डेभिड वार्नर, केन विलियमसन, जोनी बेयर्स्टो, मनिष पाण्डे जस्ता दिग्गज ब्याट्सम्यान रहेकाले टिमको ब्याटिङ लाइन बलियो छ। यसपटक टिमले राम्र अलराउण्डर लिन सक्छ।
बासिल थम्पी, बिली स्टेनलेक, मोहम्मद नाबी, श्रीबत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, विराट सिंह, बावनका सन्दीप, फेबलियन एलन, संजय यादव, विजय शंकर
रिटेन हुनसक्छन् यी खेलाडी
केन विलियमसन्, डेभिड वार्नर, मनिष पाण्डे, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, भुवनेश्वर कुमार, खलिल अहमेद, सन्दीप शर्मा, टी नटराजन, अभिशेक शर्मा, शहबाज नदीम, मिचेल मार्स, राशिद खान, जोनी बेयर्स्टो, ऋद्धिमान साह